Nembala izinsuku kazifani uma esefikile - Bayede News
Njalo ngalesi sikhathi sikhunjuzwa ukuthi umhla lu-1 kuNhlangulana wusuku lokugubha ukuzalwa kwesikhondlakhondla zomsakazo waboHlanga, uKhoziFM. Lokhu kuhle ngoba kusikhumbuza umlando wethu omqoka nosithinta ngqo. Nokho okunye okumqoka nokubuye kushalazelwe noma abakwenzayo abangaziniki isikhathi, wukubheka iqhaza labasakazi ekuqinisekiseni ukuthi le nyoni indizela phezulu. Okunye okuswelakalayo wukulumbanisa ukusakaza kwaloyo msakazi nobumqoka bakhe kubalaleli.
Ngesinwe kanjalo nesineke ukwazile ukuqhamuka nezinhlelo ezingale kokusakaza amahora lawo asuke enikwe wona.
Nakhu nje ukusakaza kukaMaChiliza oganele kwaKhoza nodume ngelikaLady D. Kuba yishwa ukuthi uma kukhulunywa ngegalelo lakhe kungabe kusenatshwa ngomthelela omuhle. Omunye uzothi ‘lapho kuchazwani ngoba phela uyasebenza futhi uyakuholela lokhu’. Ocabanga kanjena akawazi amandla omsakazo nobumqoka bokusakaza.
UMaChiliza nonkaba yakhe ilapha eMishini yaseMarianhill unendlela enza ngayo nemenza amukeleke kubantu cishe bayo yonke iminyaka kanye namazinga empilo. Iphimbo lakhe lilunjaniswa nomuntu onendaba.
Yebo lokhu kumqoka ngoba bakhona abasakaza njengoba kubhaliwe, bese kuba khona abasakaza njengaye uLady D. Lokhu ukuqaphela nxa uzwa izinkinga abantu abazethula kuye nokuba sengathi baxoxa nje nomuntu wasekhaya. Kuthatha isineke ukulalela abantu nokuyinto uMaChiliza ezwakala enayo.
UBrenda Fassie indlovukazi ye-Afro-Pop
Ngesinwe kanjalo nesineke ukwazile ukuqhamuka nezinhlelo ezingale kokusakaza amahora lawo asuke enikwe wona. Komama lapha phandle akaconsi phansi ngakho belu ngoba ubakhisa imizi namakhaya lapho ebayala noma ebabuzela kuloyo esuke engungoti.
Ukhomoza abesifazane ngaphansi kwenkundlamshikashika – Emajukujukwini (“Amajukujuku”). Ikhona nenye inkundlamshikashika – AmaSheila’s ephakela abesifazane basemadolobheni abasebenza ezindlini. Akukho ukungabaza ukuthi uMaChiliza ungabantu abasakazelayo.